भारत-चीनबीचको लद्दाख भि’ड’न्तबारे नेपालको धारणा बाहिरियो, कसलाई के भन्यो ? — Sanchar Kendra
भारत-चीनबीचको लद्दाख भि’ड’न्तबारे नेपालको धारणा बाहिरियो, कसलाई के भन्यो ?
काठमाडौ । चीन र भारतबीच लद्दाखमा भैरहेको तनाब र सैनिकहरु मा’रिएको घ’टनामा विश्वका विभिन्न देशले प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला नेपालको पनि धारणा बाहिरिएको छ । चीन र भारतबीच यसअघि दोक्लाम विवादको बेला समेत औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको नेपालले लद्दाख प्र’क’रणमा पनि सोही नीति अख्तियार गर्ने देखिएको छ ।
चीनले गिरफ्तार गरेका १० जना भारतीय सैनिकलाई रिहा गरेको छ । सोमबार लद्दाखको गलवान उपत्यकाको सीमामा भएको झ’डपका क्रममा गिरफ्तार गरिएका १० भारतीय सैनिकलाई चीनले बिहीबार साँझ रिहा गरेको हो । रिहा हुनेहरुमा एक जना कर्णेल, तीन जना मेजरसहित १० जना रहेको भारतीय पत्रिका द हिन्दूले भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।
सोमबार सीमामा भएको हिं’सक झ’डपमा एक कर्णेलसहित २० भारतीय सैनिकको मृ’त्यु भएको छ । त्यस्तै १८ जना भारतीय सैनिक घाइते भएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीनतर्फ पनि मानवीय क्षति भएको दाबी गरे पनि चीनले भने अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन । सन् १९६२ को युद्धपछि भएको सबैभन्दा ठूलो झ’डप हुनुमा भारत र चीनले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
लद्दाख सीमामा भएको हिं’सा’त्मक क्षडपपछि उत्पन्न तनाव कम गर्न भारत र चीनबीच लगातार सैन्य र कूटनीतिक स्तरबाट वार्ता भइरहेको छ । दुवै देशले मेजर जर्नेल तहको सैन्य वार्ता र विदेशमन्त्रीस्तरको वार्ताबाट सीमामा देखिएको तनाव कम गर्न सहमत भएको बताएका छन् । बुधबार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए ।